Hashi Omar oo xoriyaddiisii dib u helay kadib 19 sano oo xarig ah. Talyaaniga oo magdhaw siin doona Xaashi. - iftineducation.com
Hashi Omar oo xoriyaddiisii dib u helay kadib 19 sano oo xarig ah. Talyaaniga oo magdhaw siin doona Xaashi.
iftineducation.com – Nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Hashi Omar Hassan oo sagaal iyo toban sano ku xernaa xabsi ku yaala magaaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa maanta dib u helay xoriyaddiisii iyadoo la sii daayay maadaama dambi lagu waayay.
Hashi ayaa loo haystay inuu ku lug lahaa dil gabar saxafiyad talyaani ah oo dil loogu geystay Muqdisho sanadkii 1994 taasoo keentay in ay Talyaaniga daba galaan arrinkaasi oo ay ninkaani soo qabtaan dabdeedna ku maxkamdeeyaan dalkooda.
Qareenno iskugu jira Soomali iyo talyaani ayaa difaacay una doodayay Xaashi mudaddii uu xernaa waxaana haatan ugu dambeyn lagu dhawaaqay inuu fasaxanyahay, iyadoo la sugayo in uu helo magdhaw aad u badan oo gaaraya 3 ilaa 5 milyan oo Euro maadaama uu isagoo waxba galabsan la haystay dhowr sanadood.
Xaashi gabadha loo haystay inuu dilay ayaa la oran jiray Ilaria Alpi waxeyna aheyd saxafiyad barnaamij dabagal ah ka sameyneysay musuqmaasuqa iyo sunta ay xeebaha Soomaaliya ku daadiyaan Talyaaniga waxaana la sheegaa in gabadhaasi ay u dileen dableydaasi si kiiskaasi loo joojiyo waxaana la sheegaa in ilaa iyo hada la isku haysto cidii ka dambeysay arrinkaaasi.
Hashi oo isbedel ka muuqdo kadib markuu ku dhawaad 20 sano xabsi ku xernaa
Dawladda Peru waxay baadhaysaa dhimashada 10,000 oo raha